Object (ကံ) (Accusative Case) (ကမ္မကာရက)
သင်ခန်းစာ (၁)မှာ ရေးပြီးသား ၀ါကျလေးကိုပဲ တိုးပြီး ရေးကြမှာပါ..။
ယောက်ျားက ဘယ်ကို သွားမှာလဲ ။ နေရာ တစ်ခုခုကို ပြရတော့မှာပါ..။ သူဖုန်းစားက တောင်း၏ ဆိုရင်လည်း ဘာကိုတောင်းတာလဲ ပြောရတော့မှာပါ..။ အဲဒီမှာ ကံပုဒ် (Object)လေးတစ်ခု ထည့်ပေးမှ သိချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျကို ပေးနိုင်မှာပါ..။
အပြုခံ၊အသွားခံ၊အတောင်းခံဆိုတဲ့ ကံပုဒ်ပြစကားလုံးကို ကမ္မကာရက(Accusative Case)လို့ မှတ်ထားကြတာပေါ့..။
ယောက်ျားသည် ကျောင်း(သို့) သွား၏။
သူဖုန်းစားသည် ထမင်း (ကို) တောင်း၏။
ကျောင်းဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ နောက်မှာ (သို့)ဆိုတဲ့ စကားလုံးဆက်၊ ထမင်းဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့နောက်မှာ (ကို)ဆိုတဲ့ စကားလုံးဆက်ရသလိုမျိုး
ပါဠိ စကားလုံး Vihāra နောက်မှာ ṃ ဆက်ပေးလိုက်ရင် အနည်းကိန်းကံပုဒ်တွေဖြစ်ကရော..။
Puriso vihāraṃ gacchati.
ပုရိသော ၀ိဟာရံ ဂစ္ဆတိ။
(ယောက်ျားသည် ကျောင်းသို့ သွား၏။)
အများကိန်းမှာတော့ ၀ိဟာရ နောက်မှာe(ဧ) ဆက်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ..။
၀ိဟာရ+ဧ= ၀ိဟာရေ (ကျောင်းတို့သို့)..
ကဲ ၀ါကျတစ်ခုလုံး အများကိန်းတွေပြောင်းပြီး ရေးလိုက်ကြရအောင်..
Purisā vihāre gacchanti.
ပုရိသာ ၀ိဟာရေ ဂစ္ဆန္တိ။
ယောက်ျားတို့သည် ကျောင်းတို့သို့ သွားကြကုန်၏။
အနည်းကိန်းဆိုတာ ဧက၀ုစ် (ဧက၀စန) (Singular)
အများကိန်းဆိုတာ ဗဟုဝုစ် (ဗဟုဝစန) (Plural) ဆိုတာလည်း သိပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်တယ်..။
ကဲ ၀ါကျတော်တော်များများ ရေးလို့ရသွားပြီ..။
ယာစကော ဘတ္တံ ယာစတိ။
(သူဖုန်းစားသည် ထမင်းကို တောင်း၏)
ဗုဒ္ဓေါ ဓမ္မံ ဘာသတိ။
(ဘုရားရှင်သည် တရားစကားကို ပြောဟော၏။)
မြန်မာဝါကျများကို ပါဠိလို ရေးကြည့်ကြစို့
လူတို့သည် ကျောင်းသို့ သွားကြ၏။
လယ်သမားတို့သည် တောင်တန်းများပေါ်သို့ တက်ကြ၏။
ပုဏ္ဏားကြီးသည် ထမင်းကို စား၏။
ဘုရားရှင်သည် ကလေးငယ်များကို မြင်တော်မူ၏။
ဦးလေးတို့သည် ခွက်များကို ယူဆောင်သွားကြ၏။
သားသည် ခွေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်၏။
ဘုရင်သည် ဘုရားရှင်ကို ရှိခိုး၏။
ကုန်သည်သည် လူငယ်ကို ခေါ်ဆောင်လာ၏။
မိတ်ဆွေတို့သည် ပုဏ္ဏားကို အရိုအသေပေးကြ၏။
သူဖုန်းစားတို့သည် ထမင်းကို တောင်းကြ၏။
အေးအေးဆေးဆေးသာ ဆောင်ရွက်ကြပေရော..။ (မလုပ်ဘဲလည်း မနေကြလေနဲ့။)
Posted by ဓမ္မဂင်္ဂါ at 4:04 PM